I-Google's Antitrust Suit yiHarbinger yaManzi aMdaka kwiinguqulelo ze-IDFA zika-Apple » Martech Zone
Ngelixa ixesha lide liza, i-DOJ's antitrust lawsuit ngokuchasene noGoogle ifikile ngexesha elibalulekileyo kwishishini lezentengiso, njengoko abathengisi bezilungiselela ukukhubazeka kuka-Apple Isazisi saBathengisi (IDFA) utshintsho. Kwaye uApple etyholwa nakwingxelo yamaphepha angama-449 yamva nje yeNdlu yabaMeli baseMelika yokusebenzisa igunya lolawulo lwabo bodwa, uTim Cook kufuneka alinganise amanyathelo akhe ngononophelo.
Ngaba ukubambelela ngokuqinileyo kweApple kubathengisi kunokwenza ukuba ibe yingcali elandelayo yetekhnoloji? Lowo ngumbuzo kwi-80 yezigidigidi kushishino lobugcisa kwintengiso ngoku olucingayo.
Ukuza kuthi ga ngoku, iApple Inc. ibonakala ngathi ibambekile phakathi kwengxondorha nendawo enzima: ichithe izigidi ukuzibeka njengenkampani yabucala yabucala, nasekuphuhliseni indawo ye-IDFA, ebililitye lembombo lomntu intengiso yedijithali iminyaka. Kwangelo xesha, ukushenxisa i-IDFA endaweni yenkqubo yayo evaliweyo yeSkAdNetwork, kuyakwenza ukuba iApple ibe ngumgqatswa osenokwenzeka ngakumbi kwisuti yokuchasana.
Nangona kunjalo, ngokuhlehliswa kwe-IDFA kutshanje kwi-2021 iApple isenalo ixesha lokutshintsha indlela yayo yangoku kunye nokuphepha ukulandela iinyawo zikaGoogle. Kuya kuba bubulumko ukuba ingxilimbela yezobuchwephesha iqaphele imeko kaGoogle kwaye igcine i-IDFA okanye iphinde ivelise iSkAdNetwork ngendlela engenzi ukuba abathengisi baxhomekeke ngokupheleleyo kwidatha yomsebenzisi yedwa.
Kwimo yayo yangoku, Kucetyiswa uApple SkAdNetwork Ijongeka njengokuhamba okukhulu kakhulu ukuya kubukhosi ngaphandle kwento eyenziwe nguGoogle kwishishini lokukhangela. Nangona uGoogle engoyena mdlali ubalaseleyo kwicandelo lakhe, ubuncinci, zikho ezinye iindlela zokukhangela abathengi abanokuzisebenzisa ngokukhululekileyo. I-IDFA, kwelinye icala, ichaphazela yonke i-ecosystem yabathengisi, abathengisi, ababoneleli ngedatha yabathengi, kunye nabaphuhlisi beensiza abanokukhetha ngaphandle kokudlala ibhola ngeApple.
Ayiloxesha lokuqala iApple isebenzisa isandla sayo esingaphezulu ukunyanzela intengiso ukuba ithobele. Kwiinyanga ezidlulileyo, abaphuhlisi beapps bebetyhalela umva ngokuchasene nomrhumo omkhulu ka-Apple wama-30% kuyo yonke intengiso eyenziwe kwiivenkile zayo ze-app-isithintelo esikhulu sokwenza imali. Kuphela ziinkampani eziphumelele kakhulu ezinjengeMidlalo ye-Epic nokuba zinokwazi ukulandela idabi lomthetho kunye nesigebenga sobuchwephesha. Kodwa no-Epic ukuza kuthi ga ngoku akaphumelelanga ngokunyanzela isandla sika-Apple.
Kwinqanaba langoku, nangona kunjalo, iinkqubo eziqhubekayo zokuchasana ziya kuthatha ixesha elide ukwenza utshintsho olunentsingiselo kushishino lwentengiso. Abapapashi bayonqena ukuba ityala ngokuchasene noGoogle ligxile ikakhulu kwizivumelwano zokuhambisa zenkampani ezenza ukuba ibe yinjinjini yokukhangela emiselweyo kodwa isilele ukujongana nenkxalabo yabo ephambili malunga nenkqubo yenkampani kwintengiso ekwi-Intanethi.
Ngokophando lwakutsha nje olwenziwe ngabasemagunyeni kukhuphiswano base-UK, ziisenti ezingama-51 kuphela zedola enye ezichithwe kwintengiso ifikelela kumshicileli. Iisenti ezingama-49 ezishiyekileyo zivele zivele zivele zivele ngumphunga zithungelwe kwidijithali. Ngokucacileyo, kukho isizathu sokuba abapapashi badikwe yile nto. Ityala le-DOJ likhanyisa ubunyani obukrakra beshishini lethu:
Ukuphuma kumjikelo esiwenzileyo kuya kuba yinkqubo ebuthathaka, ecothayo, neyindinisa. Ngelixa i-DOJ ithathe amanyathelo okuqala kuGoogle, ngokuqinisekileyo inayo iApple kwindawo yayo. Ukuba iApple ifuna ukuba kwicala lasekunene lalembali xa isenziwa, isigebenga kufuneka siqale ngokucinga ngendlela esinokusebenza ngayo nomzi mveliso weentengiso kunokuba sizame ukuyilawula.